May Nyane: လိပ်ပြာ
အမရေ့...လှလိုက်တာ၊ “လောကကို ဝတ်မှုန်ကူးလို့ ဖူးပွင့်စေမယ် ယုံ” တဲ့လား၊
အမက အပေါ်မှာ ပြောခဲ့တယ်၊ ခုတလော စိတ်တွေ ညစ်ထေးနေတယ်-တဲ့၊ ကဗျာထဲမှာတော့ တွေ့လိုက် တယ်၊ “ညစ်ထေးသူတွေရဲ့ စိတ်နှလုံးမှာ လိပ်ပြာ မရှိနိုင်” တဲ့၊ ဒါဆို အမရဲ့ လိပ်ပြာကြောင့်မို့ထင်ပါရဲ့၊ ကဗျာက ခုလို တဖျတ်ဖျတ်နဲ့ လွင့်ပျံနေတာ...၊ :)
ဗန်ဂိုးလည်း အနုပညာကို စိတ်ဖြေရာအနေနဲ့ အသုံးချ သွားတာ မနည်းပါဘူး အမရာ...။
လိပ်ပြာသိပ်လှရင် နတ်ကောက်သွားဦးမယ် :)
တီချယ်ကြီး ကဗျာပြန်ရေးဖြစ်နေတာ ဝမ်းသာပါတယ်။
ဆောင်းပါးနဲ့ လုံးဝ မသက်ဆိုင်တာမိုလို့ ဘလော့ပိုင်ရှင်အနေနဲ့ ဒီကော်မန့်ကို ဖျက်နိုင်ပါတယ်။ ဒီမိုဘလော့အမည်ခံပြီး ဆန့်ကျင်ဖက် ကော်မန့်ကို လက်မခံရဲတဲ့ ပျူနိုင်ငံ ဘလော့မှ ကုလားမအကြောင်း တုံပြန်ရေးသားချက်ပါ
လူကြားလို့မှ မကောင်းဘူး။ ခင်ဗျားပြောပုံက . . . နအဖဘလော့တွေမှာ လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးခွင့်ပေးနေတဲ့အချိန်မှာ ဒီမိုဘလော့မှာ ကော်မန့်ရေးခွင့်ရတာကို ကျေးဇူးတင်ရမယ့် အနေအထားဖြစ်နေတယ်။ ပြည်တွင်းကလူတွေကို လမ်းပေါ်မှာ အသေခံဆန္ဒပြစေချင်တဲ့သူက. . .စကား ကြမ်းကြမ်းနဲ့ ပြောခံရမှာကို ဆိုးရိမ်ပြီး ဘလော့ပိတ်ထားတာ မြင်တော့ တကယ်ကို သနားမိတယ်။
ဒီမယ်.. ကျုပ်တို့က လူသတ်.. မုဒိမ်းကျင့်ဖို့ သင်ထားတဲ့ မွတ်ဆလင်ဝါဒကို ယုတ်ညံ့တယ်လို့ လက်ခံထားတယ်။ ( လူသတ် မုဒိမ်းကျင့်ဖို့ သင်ပေးတာ မကောင်းဘူးဆိုတာ ရှင်းပြဖို့ လိုသေးလား? ) ကျုပ်တို့ မျိုးချစ်စိတ်ရှိတဲ့သူတွေက ဗုဒ္ဓဘာသာ နဲ့ မွတ်ဆလင် ခွဲခြားတော့ ဘာသာရေးအစွန်းရောက် ဆိုပြီး စောက်တင်းပြောကြတယ်။ ခင်ဗျားတို့ကျတော့ မြန်မာအချင်းချင်း ဒီမို နအဖ တံဆိပ်ကြည့်ပြီး မကြီးမငယ်နဲ့ ရန်ဖြစ်နေကြတယ်။ ဒီမို/နအဖ တံဆိပ်တွေကြည့်ပြီး မတရားမုန်းတီးနေကြတယ်။ မြန်မာအချင်းချင်း ရန်ဖြစ်ရတာ မရှက်ဘူးလား?
ခင်ဗျားတို့က လူနည်းစုဖြစ်လို့ ငြိမ်နေရတဲ့ ကုလားတွေကို လက်ညှိးထိုးပြီး ကုလားအားလုံးကောင်းပါတယ်လို့ အရှက်မရှိ ကြက်တူရွေးတွေလို ပြောနေကြတယ်။ ဒါပေမယ့် သမိုင်းအထောက်အထားတွေကို အခြေခံပြီး တကမ္ဘာလုံးမှာ ဗုံးဖေါက် လူသတ်နေတဲ့ ကုလားတွေဟာ လူဦးရေများလာရင် အိမ်ရှင်တွေကို သတ်ဖြတ်ပြီး ဖျက်ဆီးတတ်တယ်လို့ သတိပေးတာကို မကျေနပ်ကြဘူး။ မှန်ကန်ရဲ့လား?
မြန်မာပြည်မှာ ခိုက်ကပ်နေတဲ့ ကုလားတွေ ကျုပ်တို့ကို လူမျိုးရေး ၊ စီးပွားရေး ၊ နိုင်ငံရေး ၊ ဘာသာရေး အဖက်ဖက်မှာ စော်ကားနေတာ မနည်းတော့ဘူး။ အဲဒါတွေကို ခင်ဗျားတို့ သိနေပေမယ့် ဘာမှ မပြောဘူး။ ကုလားကို အပြစ်တင်ရမှာ သိပ်ကြောက်တယ် မဟုတ်လား? ဒါပေမယ့် ကျုပ်တို့က မခံမရပ်နိုင်လို့ ကုလားကို ပြန်လုပ်တဲ့အချိန်မှာ . . မျိုးချစ်စိတ်မရှိပဲ ဆရာကြီးပုံစံနဲ့ သြ၀ါဒပေးကြတယ်။ မရှက်ဘူးလား?
ဒီတော့ . . ကုလားကိုကြောက်တဲ့ ခင်ဗျားရဲ့စကားကို အလေးမထားနိုင်ဘူး။ ကုလားထိမှ ဆတ်ဆတ်ထိနာတဲ့သူတွေကို မလေးစားနိုင်ဘူး။ ဒီမိုတွေ နအဖကို မုန်းသလို ကျုပ်လဲ ကုလားကို မုန်းပါတယ်။ ထို့အတူပဲ နအဖစစ်ဗိုလ်တွေ ဒီမိုသမားတွေကို မုန်းသလို ကျုပ်လဲ ကုလားကို မုန်းပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကုလားမြအေးကို ဆက်ပြီးဆဲပါမယ်။ ကုလားမက အသံနဲ့ မြူဆွယ်တာကို သဘောကျနေတဲ့ကိစ္စကို အပြစ်မပြောပါဘူး။ ဆက်ပြီးရင်ခုံပါ။ စကားလုံးလှလှလေးတွေကို နှစ်သက်တဲ့ ဒီမိုတွေက . . . .အသံကောင်းတဲ့ ကုလားမကို စွဲလန်းတာ မထူးဆန်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားတို့လုပ်နေတာ နိုင်ငံရေးလား.. ကလေးကုလားအလုပ်လားဆိုတာ မညှာတမ်းစဉ်းစားပါ။ ရွေးကောက်ပွဲ တစ်လပဲလိုတော့တဲ့အချိန်မှာ . . ကုလားမကို ဘုန်းတော်ဖွဲ့ရမှာလား ရွေးကောက်ပွဲကို ဆန့်ကျင်ဖို့ နည်းလမ်းတွေ စဉ်းစားရမလားဆိုတာ… နဖူးပေါ်လက်တင်ပြီး တွေးခေါ်လိုက်ပါ။
ကုလားကမြန်မာကို အနိုင်ကျင့်ချိန်မှာ အသံတိတ်နေသူများကို တိုက်ခိုက်နေတဲ့
....ညစ်ထေးသူတွေရဲ့ စိတ်နှလုံးမှာ လိပ်ပြာမရှိနိုင်..
လိပ်ပြာမရှိပေမယ့် တဖက်သားကို လိပ်ပြာနှုတ်တာတို့ လိပ်ပြာလန့်အောင်လုပ်တာတို့တော့ တတ်နိုင်သေးတယ်ဗျို့။
ဒါထက် အပေါ်က သခိုးဇော်မျှင် (သခင်ဇော်မျိုး)ကတော့ ပိတုန်းနဲ့တူတယ်။ ဘလော့ပန်းခင်းထဲမှာ မဲမဲ မဲမဲ (Bold လုပ်ထားလို့) နဲ့ တဝီဝီ လျှောက်သွားနေတာ တွေ့ရလို့ပါ။
I enjoy ur poems n fly among butterflies.I like the last paragraph most.
လိပ်ပြာရေ နင်ဟာနင်နေပေမဲ့ ချစ်သူတွေက နင့်အလှကိုကိုစာဖွဲ့ မလိုသူတွေကို နင့်ဘဝ ကို ချောက်ချ တကယ့်လိပ်ပြာက ဘာလဲ နင်က ဘာလဲ သက်ရှိ သတ္တ ဝါ ငယ်လေးတစ်ကောင် ရေ နင်ဘဲကောင်းပါတယ် (လောကကို ဝတ်မှုန်ကူးလို့ ဖူးပွင့်စေမယ် ယုံ....။)တဲ့ တကယ်တော့ လိပ်ပြာလေးရယ် ကိုယ်ယူထားတဲ့တာဝန်ကို ကိုယ်ကြေပြွန်အောင်ထမ်းရမယ်မို့လား......။ နင့်ဝမ်းစာနင်ရှာပေမဲ့ လောကကိုအလှဆင်ပေးနေတဲ့ နင့်လောက်မှ တာဝန်မကြေနိုင်တဲ့သူတွေရှိနေလေတော့ ပိတုန်းနဲ့လိပ်ပြာမကွဲပြားနိုင်ဘူး တကယ်တော့ လိပ်ပြာကြောင့်ပန်းရှိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး ကွယ် ပိတုန်းညိုတွေကြောင့် ပန်းတွေငိုနေရတာပါ.........။